फेरि घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ?
Homeसमाचारफेरि घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ?
March 12, 2021 admin समाचार 5547
शुक्रबार नेपाली ब’जारमा सुनको मूल्य घटेको छ । बुधबारको तुल’नामा बिहीबार सुनको मूल्य केही बढेपनि शु’क्रबार पुनः घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यव’सायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ८६ हजार २०० रुपैयाँमा कारो’बार भएको हो ।
यसअघि बिहीबार सु’नको मूल्य तोलामा ८६ हजार ८०० र बुधबार ८६ हजार २०० नै रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै शुक्रबार तेजा’वी सुन तोलामा ८५ हजार ७५० रुपैयाँमा कारो’बार भएको छ । यसैबीच शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि घटेर तोलामा १२७० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यसअघि बि’हीबार चाँदीको मूल्य तोलामा १२८५ रुपैयाँ रहेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्- पुनःस्था’पित संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ता जोगाउन र नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि तानाता’नमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार जोगाउन जसपाको साथ खोजिरहेका छन् । यता प्रमुख प्रति’पक्षी नेपाली काँग्रेस र सत्ता समर्थक नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि जसपाको साथ खोजि’रहेको छ । ३४ सांसद गरेको जसपा सरकार जोगाउन र नयाँ निर्माणका लागि निर्णा’यक छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर’कार टिकाइ राख्न थप १८ सांसद आवश्यक पर्दछ भने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकार निर्मा’णका लागि जसपाको साथ अनिवार्य छ । यही परिदृश्यका बीच जसपा तानाता’नमा परेको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभा’पति देउवाले एकै समय छलफलका लागि जसपालाई बोला’इएको पाइएको छ ।
ओलीले विहिबारको छलफ’लको निरन्तरताका लागि शुक्रबार अपरान्ह चार बजे सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएका छन् । यस्तै देउवाले पनि जसपाका शीर्ष नेतालाई ठीक त्यही समय बूढानी’लकण्ठ बोलाएका छन् । जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले चार बजे प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बताए । यता अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोही समय देउवाले पनि बोलाएको रातोपाटीलाई जान’कारी दिए ।
चार बजे जसपा बालु’वाटार जान्छ कि बूढानीलकण्ठ भन्नेमा जसपामा नेताहरु नै अन्यौल देखिएका छन् । सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिन जस’पा संसदीय दलको बैठक पनि बोलाइएको छ । जसपाले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता–रिहाइ तथा मधेस आन्दोल’नका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका शर्त राख्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धनबारे जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई देउवा–प्रचण्ड र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीसँग नजि’क देखिएको पाइन्छ । – रातोपाटीबाट
चर्चित युट्युवर विश्व लिम्बुले खोले आफ्नो डि’र्भोस हुनुको कारण (भिडियो सहित)
April 4, 2021 admin समाचार 5550
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशला एक नेपाली नि’र्माधिन बहुउपयोगी रङ्गशाला हो। यो रङ्गशाला धुर्मुस सुन्तली फाउन्डे’सनले भरतपुर महानग’रपालिका भित्र निर्माण गरिरहेको छ । फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सिलान्यासको दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट
December 29, 2021 admin समाचार 3461
October 5, 2020 admin समाचार 11698